Dhammaan noocyada ilaha lacag la'aanta ah ee degelkan cusub: FreebiesByPeople | Abuurista khadka tooska ah
Astaamaha, font, ebook, mawduucyada iyo waxyaabo badan oo badan oo bilaash ah oo laga helo FreebiesByPeople
Manuel Ramirez | | Fuentes, Astaamaha, Khayraadka
FreebiesByPeople waa degel lagu soo daabacay waxyaabo bilaash ah si loo kordhiyo shaqadeena oo aan awood ugu siino macaamiisheena tayada ugu fiican. Halkan waxaan ka heli karnaa astaamo, noocyo, ebook, mawduucyo iyo waxyaabo kale oo badan.
Degel heersare ah barnaamijyada iyo naqshadeeyayaasha iyo in dhinaca bidix aad ka gali karto qaybaha ugu muhiimsan ee goobta, adoo dhaqaajinaya badhanka ka muhiimsan: loo oggol yahay adeegsiga ganacsiga; Waxaan mar horeba jeclaan lahayn inaad nagu siiso xaruntan bogagga kale.
Taasi waa, FreebiesByPeople waxaad ka heli kartaa ilaha, astaamaha, mawduucyada, xirmooyinka isku xirnaanta, Mawduucyada HTML, plugins, jeexjeexa CSS, ebook, moodooyinka 3D, Mawduucyada WordPress, barnaamijyada websaydhka iyo waxyaabo kale oo taxane ah oo aan kugula talineyno inaad booqato.
Wadar ahaan waa in ka badan 1.000 agab bilaash ah oo lagu daray 14 qaybood oo kala duwan taasna si fiican ayaa loo abaabulay si loo helo ikhtiyaarkaas bilaashka ah ama ganacsiga ah ee loogu talagalay shaqadeena macaamiisha.
Bog kasta oo ka mid ah kheyraadka waxaan ka heli karnaa badhanka si aan uga dhigno mid la jecel yahay, soo dejiso, la wadaag oo xitaa ku tijaabi demo toos ah. Runtu waxay tahay inay bixiso xarumo badan oo lagu helo kheyraadkaas aan raadineyno qaab aad u fudud.
Xagga sare waxaan ku haynaa sidoo kale waxyaabaha aasaasiga ah, vip iyo kuwa raacsan marka aan kujirno kheyraad. Waxay sidoo kale muujineysaa dhammaan waxyaabaha ku jira si aan fikrad fiican uga helno waxa aan soo dejineyno oo sidaas awgeed wax walba u fududeynaya.
Runta in inuu noqdo degel dhowaan la abuuray Si aad ah ayaa looga fiirsaday waxayna muujineysaa inay barteen wax walba si ay u bixiyaan khibrad weyn oo isticmaale. Waxaan kugula talinaynaa halkan, iyo sidoo kale kheyraadkan kale kaas oo lagu kordhinayo buugaaga.
Tani websaydhka waxaa kafaala qaaday ByPeople iyo inay iyaguna iibiyaan kheyraadkooda haddii aan mar hore dooneyno inaan heer kale aadno. Isku day sida ay bilaash u yihiin qaar ka badan ilaha muhiimka ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Astaamaha, font, ebook, mawduucyada iyo waxyaabo badan oo badan oo bilaash ah oo laga helo FreebiesByPeople
Iphone cusub 11 iyo Iphone 11 Pro